Ayizizo zonke iziCwangciso zoMxholo eziDinga iBali | Martech Zone
Amabali akho kuyo yonke indawo kwaye ndiyagula. Zonke ii-app zosasazo zasekuhlaleni zizama ukubaphosa ebusweni bam, yonke iwebhusayithi izama ukunditsalela kwibali labo lokucofa, kwaye ngoku lonke uphawu lufuna ngokweemvakalelo qhagamshela nam kwi-Intanethi. Nceda uyeke.
Izizathu zokuba Ndidiniwe ngamabali:
Uninzi lwabantu lukho yoyikekayo ngokubalisa amabali.
Uninzi lwabantu alunjalo kufuna amabali. Gasp!
Ndiyazi ukuba ndiza kubacaphukisa abaqeqeshi bomxholo phaya abathanda ukuhambisa umbongo, ukwakha ubunyani, kunye nokubamba iimvakalelo zababukeli, abaphulaphuli okanye abafundi babo.
Akukho nto ilunge ngaphezu kwebali elimnandi elibaliswa ngumbalisi mabali. Kodwa ukufumana ibali elibalaseleyo okanye umbalisi webali obalaseleyo ukuxelela kunqabile. Ababalisi bamabali abakhulu baxhamla izibonelelo zamabali amnandi kuba lishishini labo!
Isenokungabi njalo akho Shishini.
UGoogle wenze itoni yophando malunga nezinto ezikhuthaze abantu ukuba bathathe inyathelo kwi-Intanethi, bafike kwi-4 amaxesha ahlukeneyo apho amashishini nabathengi bathathe inyathelo.
Ndifuna ukwazi mathuba
Ndifuna ukuhamba mathuba
Ndifuna ukwenza mathuba
Ndifuna ukuthenga mathuba
Ewe kunjalo, ukuba umthengi unexesha lokubukela, ukumamela, okanye ukufunda ibali, banokuzibandakanya nzulu kunye negama lakho kwi-intanethi. Kodwa ndingatsho ukuba oku kunqabile. Kwaye ndiyakholelwa ukuba ubalo lwamashishini luxhasa isiseko sam. Omnye umzekelo kukukhula kwamanani aphindwe kabini kunye nokuthandwa (okungaphantsi kwemizuzu emi-2) "indlela yokwenza" iividiyo ezikwi-intanethi. Abantu abakhangeli mabali, bakhangele izisombululo kwiingxaki zabo.
Anditsho ukuba inkampani yakho mayishiye ukubaliswa kwamabali ngokupheleleyo. Xa sisenza uphando kwaye siphuhlisa ibali elinyanzelisayo, i-infographics kunye ne-whitepapers esiyilungiselela abathengi bethu yenza ngokugqwesileyo. Nangona kunjalo, sibona abantu abaninzi besiza kwaye beguqula iisayithi zabaxumi bethu xa sinika isisombululo sokulungisa ingxaki yabo.
Ngelixa isilayidi somxholo wakho kufuneka uxele ibali elinyanzelekileyo lobukho benkampani yakho, umseki wakho, okanye abathengi obancedayo, kuya kufuneka ube namanqaku amafutshane, acacileyo athetha no:
Ungayilungisa njani ingxaki.
Isisombululo sakho sinceda njani ukulungisa ingxaki.
Kutheni isisombululo sakho sahlukile.
Indlela abathengi bakho abanokuzithethelela ngayo iindleko zakho.
Umzekelo 1: Itekhnoloji ePhakamileyo, akukho bali
NIST yi IZiko leLizwe leMigangatho kunye neTekhnoloji. Bahlala bepapasha iingxelo ezinde zophando ezincomela imigaqo-nkqubo kunye neenkqubo zezihloko ezinje ngolawulo lokufikelela, ukuqhubeka kweshishini, ukuphendula ngeziganeko, ukubuyiswa kweentlekele kunye nezinye iindawo eziphambili. Ii-PDFs zineenkcukacha ezimangalisayo (njengalo naluphi na uxwebhu olusemthethweni lophando), kodwa uninzi lweengcali ze-IT kunye nezoKhuseleko kufuneka ziziqonde izinto ezithathiweyo- zingafundi zonke iinkcukacha.
Umxhasi wethu, amaZiko oLwazi lweLifeline, wamkelwe kwilizwe liphela njengenkokeli kwishishini leziko ledatha kunye neengcali kwezokhuseleko. Ngapha koko, liziko ledatha labucala eliye lafumana elona nqanaba liphezulu leemfuno zokhuseleko olwenziwayo-iFEDRamp. Umququzeleli u-Rich Banta yenye yeengcali eziqinisekisiweyo emhlabeni. Ke, endaweni yokuphinda uluhlaziye lonke uxwebhu, isityebi samkela isishwankathelo esiphandiweyo sabhalwa liqela lethu elichaza ingxelo. Umzekelo - INGXELO 800-53.
Ixabiso lala manqaku kukuba ligcina ithemba labo kunye nabathengi itoni yexesha. Ngokwamkelwa kukaRich, iincwadana zakhe zophando zithembekile kwaye zixabisiwe ngabaphulaphuli bakhe. Akukho bali… uphendula ngokufanelekileyo Ndifuna ukwazi iimfuno zabaphulaphuli bakhe.
Umzekelo 2: Uphando oluxabisekileyo, akukho bali
Omnye wabathengi bethu sisisombululo esikhokelela phambili kwiingcali zokugaya udliwanondlebe nabagqatswa ngomyalezo obhaliweyo, I-Canvas. Itekhnoloji entsha enjalo akukho mntu ukhangela olu hlobo lweqonga ngeli nqanaba. Nangona kunjalo, abenzi-zigqibo abafanayo bafuna olunye ulwazi kwi-Intanethi. Silincedile iqela labo ukwenza uphando kunye nokwenza uluhlu lwe ixabiso lomqeshwa ngexabiso eliphantsi oko kukhulisa ukuzibandakanya, ukugcinwa kunye nembuyekezo enkulu kutyalo-mali.
Kwakhona, akukho bali apho - kodwa liphandwe kakuhle, libanzi, kwaye libalulekile inqaku eliphendulayo Ndifuna ukwenza xa abaqeshi bafuna ukwenza izinto ezintsha zabasebenzi.
Ngaba ujonge liphi ithemba lakho?
Kwakhona, andikhathaleli amandla okubalisa amabali, ndiyacebisa ukuba ayisiyiyo kuphela kwesixhobo kwibhokisi yakho yezixhobo. Kuya kufuneka ukhethe isixhobo esifanelekileyo ukuze ufumane ithemba elifanelekileyo. Chaza oko kufunwa ngabaphulaphuli bakho kwaye ubabonelele.
tags: ukugaywa kwevasvasIinzuzo zomqeshwaUbuchwephese obuphezuluhrNdifuna ukuthengaNdifuna ukwenzaNdifuna ukuhambaNdifuna ukwaziamaziko eenkcukacha zobomiukuqashwaibaliUkuxoxa ngamabali
Cloudimage.io: Imibhalo egciniweyo, eKhanyiweyo, ehlaziyiweyo, okanye eyoMfanekiso weWedding njengeNkonzo
Jan 13, 2018 kwi-6: 29 AM
Enkosi uDouglas ngeposi elinolwazi kakhulu. Ndiyazi ukuba uMxholo uyinkosi kodwa akuyomfuneko ukuba umxholo wakho ubenamagama ali-1000 +. Ndiyakholelwa ukuba umxholo wakho kufuneka ube nolwazi olwahlukileyo kwaye utsala iindwendwe. Nokuba yeyiphi ubude.
Jan 13, 2018 ngo-10: 25 PM
Ndivuma ngokupheleleyo-ukuya kuthi ga kwinqanaba. Kunzima kakhulu ukubhala ngokuchanekileyo ngesihloko ngaphandle kokubhala ngokweenkcukacha. Kwaye uya kufumana amaphepha ambalwa kakhulu akwizinga eliphezulu lamagama aphambili akhangelwe xa ufuna imveliso okanye inkonzo engaphantsi kwamagama ayi-1,000 XNUMX. Anditsho ukuba ngumgaqo… kodwa ndingatsho ukuba ukugqibelela.